Ukulungisa ukubhukha njengoMbungazi - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Ukulungisa ukubhukha njengoMbungazi – isihloko sosizo
Ukulungisa ukubhukha njengoMbungazi
Thumela isivakashi sakho isicelo sokushintsha uhambo
Qiniseka ukuthi izinguquko zakho azingqubuzani namasethingi akho endlu. Kuyasiza futhi ukuthumela isivakashi sakho umyalezo ochaza ukuthi kungani ucela izinguquko.
Iya kokuthi Ukubhukha bese ukhetha ukubhukha ofuna ukukushintsha
Chofoza okuthi Imininingwane bese uchofoza okuthi Shintsha noma khansela ukubhukha > Shintsha ukubhukha
Ngaphansi kokuthi Imininingwane yokubhukha, yenza izinguquko zakho ezinsukwini noma enanini lezivakashi bese uchofoza okuthi Gcina
Ngaphansi kokuthi Izindleko zesivakashi, faka izindleko ezintsha zokuhlala
Buyekeza izinguquko, bese uchofoza okuthi Thumela isicelo
Thepha okuthi Ikhalenda bese ukhetha ukubhukha okufunayo
Ngaphansi kokuthi Imininingwane yokubhukha, iya kokuthi Izinsuku noma Izivakashi bese ucindezela okuthi Shintsha
Yenza izinguquko zakho bese uthepha okuthi Gcina
Ngaphansi kokuthi Izindleko zesivakashi, iya kokuthi Izindleko zokuhlala bese uthepha okuthi Shintsha
Faka inani elisha bese uthepha okuthi Gcina
Buyekeza imininingwane bese uthepha okuthi Thumela isicelo
Iya kokuthi Namuhla bese ukhetha ukubhukha ofuna ukukushintsha
Thepha okuthi Shintsha noma khansela ukubhukha > Shintsha ukubhukha
Uma isivakashi senqaba noma singaphenduli, ukubhukha kuzohlala kungashintshile. Uma samukela, kuzobuyekezwa ngemininingwane yakho emisha.
Uma inani lishintsha, bazokhokhiswa noma babuyiselwe imali kuye ngokwesidingo. Uma inkokhelo yabo ingathunyelwanga ngempumelelo phakathi namahora angu-48, ushintsho luzonqatshwa ngokuzenzekelayo futhi ukubhukha kuzobuyela esimweni sokuqala.
Uma izinsuku zishintsha, inqubomgomo yokukhansela yendlu yakho izosebenza ezinsukwini zakho ezintsha.
Uma umuntu ongase abe yisivakashi ekuthumelela umyalezo ngaphambi kokuba abhukhe, ungamthumelela inani oliqokile, noma isaphulelo esikhethek…